Puntland oo u dabaaldegaysa maalinta sanadguuradeeda 19-aad - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandPuntland oo u dabaaldegaysa maalinta sanadguuradeeda 19-aad
Puntland oo u dabaaldegaysa maalinta sanadguuradeeda 19-aad
August 1, 2017 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Calanka Puntland. [Xigashada Sawirka: Getty Images]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa maanta oo Talaado ah u dabaaldegaysa maalinta sanadguuradeeda 19-aad.
Gobolka oo dhan, xafiisyada dowladda iyo meelaha wax lagu barto ayaa xiran munaasabada sanadguurada darteed.
Ma jirto dhoolatus milatari oo dhacaya, balse munaasabad balaaran ayaa ka dhici doonta xarunta madaxtooyada caawa oo Talaado ah fiidkii, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Puntland waxaa la asaasay 1-dii Agoosto 1998, 19-kii sanno ee lasoo dhaafay waxay ku kirtay nabad iyo xasilooni.
Puntland ayaa ka badbaaday colaada sokeeye iyo dagaalka hubaysan ee Al-Shabaab taasoo waxyeeshay qaybaha kale ee dalka.
May 26, 2017 Bisha barakaysan ee Ramadaan oo laga arkay gudaha Soomaaliya
June 11, 2017 Ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamo ajnabi ah oo burburiyay saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen Jubbada Dhexe
August 2, 2017 Ugu yaraan 10 qof oo ku dhaawacantay qarax gaari oo ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo
June 6, 2017 Madaxweynaha Soomaaliya oo tagay magaalo xeebeedka Kismaayo
Puntland celebrates its 19th anniversary day
Ugu yaraan saddex ilaalo ah oo ku dhimatay weerar ay Al-Shabaab ku qaaday kantaroolka Kalabayr ee gobolka Hiiraan
Beledweyne-(Puntland Mirror) Dagaalyahano katirsan ururka Al-Shabaab ayaa maanta oo Axad ah weerar ku qaaday kantaroolka Kalabayr ee gobolka Hiiraan, sida ay sheegeen dadka deegaanka. A-Shabaab ayaa weerarkaas ku dishay ilaa saddex kamid ahaa ilaalada kantaroolka, [...]
Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo geeriyooday
Ankara-(Puntland Mirror) Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa maanta oo Axad ah ku geeriyooday dalka Turkiga, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisu. Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka tacsiiyeeyay geerida ku timid [...]
QM oo Kiinya u sheegtay in loo baahanyahay wakhti badan si qaxootiga Soomaalida loogu cesho dalkooda
Kiinya waa in ay dib u dhigtaaa wakhtiga ay u goysay bisha November in 350,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku jira xerada qaxootiga ugu weyn Caalamka ay dib ugu laabtaan dalkooda dagaalada halakeeyeen oo [...]